Iindaba - “I-CHINAPLAS 2012 ″ Inombolo ye-Asia kunye ne-Nombolo ye-2 yeHlabathi kuMboniso weRabha kunye nePlastiki ukubuyela eShanghai ngo-Epreli
“CHINAPLAS 2012 ″ Inombolo 1 yaseAsia kunye noNombolo 2 weHlabathi uMboniso weRubber kunye nePlastikhi ubuyela eShanghai ngo-Epreli.
“CHINAPLAS 2012 ″ Inombolo 1 yaseAsia kunye noNombolo 2 weHlabathi kuMboniso weRubber kunye nePlastikhi ubuyela eShanghai ngo-Epreli.
"I-CHINAPLAS 2012 ″ (i-26th China International Plastics kunye neRubber Industry Exhibition) izakubuyela eShanghai ukusukela ngomhla we-18 ukuya kowama-21 ku-Epreli ka-2012 kwaye izakubanjelwa eShanghai Pudong New International Expo Centre.
“UMBONISO waseChinapas wamazwe ngamazwe nePlastiki” wabanjwa okokuqala ngo-1983 kwaye uneminyaka engama-25 yempumelelo. Nguye kuphela uMboniso waseChina weRubber kunye nePlastics oxhaswe yi-EUROMAP, kwaye kuphela kweTshayina yokuphumelela uMbutho woShishino lweMiboniso weHlabathi. (UFI) IiPlastiki ezivunyiweyo kunye noMboniso weShishini leRabha. Iiplastikhi ezininzi zasekhaya nezangaphandle kunye nemibutho yecandelo leerabha kunye nolwezantsi lixhasa ngokupheleleyo, "I-CHINAPLAS International Rubber kunye nePlastics Exhibition" iye yaba liqonga elibalulekileyo leenkampani zamazwe ahlukeneyo ukuba zingene eTshayina nakwiimarike ezisakhasayo eAsia, kwaye baseke uthungelwano lokusasaza kwilizwe liphela.
“I-CHINAPLAS 2011 ″ ivalwe ngempumelelo ngoMeyi 20. Umboniso utsale ababonisi abangama-2,435 abavela kumazwe angama-34 nakwimimandla, isikali safikelela kwinqanaba eliphezulu elitsha, elingaphaya kwe-180,000 yeemitha zesikwere, kwaye siye samkelwa lishishini njengelesibini ngobukhulu kwilizwe laseChinaplas. Umnyhadala weentsuku ezine wawungazange ubonwe, kwaye inani labatyeleli lafikelela kwenye irekhodi eliphezulu, lafikelela kuma-94,084, ukonyuka nge-15.5% ngaphezulu kweseshoni edlulileyo, nalapho i-20.27% yayingabatyeleli abavela kumazwe aphesheya kwezilwandle nakwimimandla.
Ngo-Epreli 18-21, 2012, “I-CHINAPLAS 2012 ″ ibuyele eShanghai New International Expo Centre. Isikali siya kufikelela kubude obutsha. Indawo yomboniso kulindeleke ukuba ifike kwi-200,000 yeemitha zesikwere, kubandakanya neendawo zemiboniso ezili-11 kunye neepavili ezili-11 zikaZwelonke / zengingqi ezihlala kuzo zonke iiholo ezili-17 empuma, entshona nasemantla amaphiko eZiko leMiboniso eNtsha yaMazwe ngaMazwe.
Isicwangciso esitsha seminyaka emihlanu saseTshayina, sisebenzisa amandla emarike
Ngexesha leSicwangciso seShumi elinesiBini seminyaka emihlanu (2011-2015), i-China izakujolisa kuphuhliso lwamashishini asixhenxe avelayo-ulondolozo lwamandla kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo, iteknoloji yolwazi lwesizukulwana esilandelayo, ishishini lezinto eziphilayo, ukuveliswa kwezixhobo eziphezulu, amandla amatsha, izinto ezintsha kunye nezithuthi zamandla amatsha. Kule minyaka mihlanu izayo, uphuhliso lwamashishini afana ne-grid smart, amandla omoya, amandla elanga, kunye nezithuthi zamandla amatsha ziya kuthi zivelise imfuno enkulu yezixhobo zobuchwephesha, izinto eziguqulweyo, i-bioplastics, irabha ekhethekileyo kunye nokuchaneka kokulungisa izixhobo , kunye nokukhuthaza uphuculo lweplastiki kunye nerabha.
IShanghai yenye yeendawo eziqolileyo zophuhliso lwezoqoqosho nezamashishini e China
I-East China yenye yezona ndawo zikhawulezayo nezona zivuthiweyo kuqoqosho lwase China, kwaye ikwayi-R & D ebalulekileyo kunye nesiseko semveliso yezinto zeplastiki. Ngo-2010, ukuveliswa kweemveliso zeplastiki eMpuma China kwafikelela kwizigidi ezingama-24.66 zeetoni, kubalwa ama-42% eziphumo zelizwe zizonke. IShanghai liziko leMpuma yeTshayina kwaye likhaya kubaninzi babavelisi abaphambili beemveliso zerabha kunye noomatshini. Ngo-2010, isiphumo esipheleleyo seemveliso zeplastiki eShanghai sasizi-2.04 yezigidi zeetoni, kwaye isiphumo esipheleleyo sentlanzi (kubandakanywa ipholiyesta) sasizizigidi ezingama-4.906 zeetoni, ukonyuka ngama-27% ngaphezulu ko-2009. Okwangoku, iShanghai iseke iqhinga lophuhliso oluphezulu Umxholo wetekhnoloji kunye nexabiso eliphezulu elongeziweyo.
Ngexesha "leShumi elinesiBini leminyaka leSicwangciso seMinyaka emihlanu", iShanghai iya kugxila ekuphuhliseni izinto ezintsha ezinje ngeplastikhi zobunjineli ezintsha, iialloys zeplastikhi, izinto ezihlanganisiweyo eziguqulweyo, ulwakhiwo kunye nezinto zokuhombisa, iinxalenye zeemoto kunye neendawo zangaphakathi nezangaphandle zokuhombisa, iintambo zombane kunye neentambo zamehlo kulwazi lwe-elektroniki kunye nobunjineli bonxibelelwano. , Ezifana nezinto zekristale zolwelo ze-polym, izinto ezingabonakaliyo, njl., Ukuhlangabezana neemfuno zeeprojekthi eziphambili neziphambili ezinje nge-aerospace, ubunjineli baselwandle, amandla omoya, ulwakhiwo lwezithuthi zasedolophini. Ke ngoko, urhulumente wase-China uzakuthatha "isiCwangciso seShumi elinesiBini seminyaka emihlanu" njengethuba lokuphucula ngamandla izinto ezintsha kunye neemveliso ezinomxholo ophezulu wobuchwephesha kunye nexabiso elongeziweyo, kwaye azise iimveliso eziphambili, ubuchwepheshe kunye nezisombululo ezivela kwihlabathi liphela ukuhlangabezana iimfuno eziphezulu zamashishini ahlukeneyo asezantsi. Kleyima. "I-CHINAPLAS International Rubber & Plastics Exhibition" ilandela inkqubela phambili yolu shishino kunye nokwazisa iimveliso ezintsha ezivela kwihlabathi lonke kwiimarike zaseTshayina naseAsia.
Bamba indawo efanelekileyo yomboniso kwaye wonwabele iinkonzo zokunyusa ezilungileyo
Ababonisi abaninzi babhukishe iminquba kunyaka ozayo kwangaphambili, kwaye baqinisekile ukulungiselela omnye umboniso kumboniso olandelayo. Amashishini angangena ngokukhawuleza kwiwebhusayithi yomboniso ukuze angenise izicelo zomnquba, athathe inxaxheba kulo msitho weshishini, kwaye onwabele "I-CHINAPLAS 2012 International Rubber and Plastics Exhibition". Inkonzo ebalaseleyo yokukhuthaza enikezelwa lishishini.
Abandwendweli banokubhalisa kwi-intanethi ukutyelela umboniso wonyaka olandelayo, bayirhoxise intlawulo yokwamkelwa ye-RMB 20 kwaye bafumane izibonelelo ezininzi.